globalpressonline » Fadeexadaha qaawan ee dhaawici kara jiritaanka Dimuqraadiyada Curdinka ah ee Somaliland hadii aan dhakhso loogu gurman.
Fadeexadaha qaawan ee dhaawici kara jiritaanka Dimuqraadiyada Curdinka ah ee Somaliland hadii aan dhakhso loogu gurman.
Somaliland waa dawlad aan la ictiraafin oo lugo jilicsan ku taagan taas oo hadana xili waqtiyeedkeedii iyo maandhaytkii uu shacabku doortay ay dhamaatay 27/6/2015 Xukuumada JSL waxay kursiga ku fadhidaa mudo kordhin kooban si ay dalka u gaadhsiiso doorashooyin xor ah oo xalaal ah 27/3/2017 . Daalaadhaca ka muuqada ee ay Xukuumadu labada Doorasho ku kala qaadaysaa waxay keeni doontaa in Somaliland suncadii iyo kalsoonidii ay Caalamka ku lahayd ay aad hoos ugu dhacdo gaar ahaa karaamadadii iyo kalsoonidii ay u hayeen Somaliland deeq bixiyayaashii ka caawinaayey kharashka doorashooyinka iyo diiwaangelintaba.
2- Golaha Baarlamaanka: “Waxay noqdeen goob laga xoogsado
A) Qaar shaqadoodii noqotay Guulwadeyn iyo Dilaalnimo B) iyo qaar iyagu iib ah ” for sale ” oo weliba raqiis ah.
3- Golaha Guurtida : Malaha ” Balance of power ”
4- Hayadaha dawalada iyo qorsheyaashooda :
5- Wasaarada Duulista Hawada: “waxay noqotay seere shaqsi uxidhan”
7- Waxaa mujtamaca reer JSL ay ka dheregsan yihiin in dhamaan Heshiisyadii Xukuumadu gashay intii ay hogaanka dalka haysay ay wada bureen oo bur-bureen waayo waxay wada ahaayeen Heshisyo Ganacsi ku saleysan oo qusum iyo qoon wada ah.Waxaa heshiisyadaa ka mid : A) Heshiiskii Hawada ee ay Somalia la gashay. B) Heshiiskii shirkada Genel Energy ay la gashay. C) Heshiiskii ay Ciidamada Ilaalada Shidaalka ( O.P.U ) ay la gashay. D) iyo Heshiiskii dawladii Cigaal Shirkadii shidaalka ee Total ay lagashay oo Xukuumadani jebisay dacwadeeduna ku soo maqan tahay. E) Heshiiskan ay dhawaan Xukuumadu la gashay shirkada DPW ayaa isna u muuqada mid aan fuleyn maadaama Xukuumada waqtigeedii ay ka hadhay 6-bilood oo keliya oo aaney welina mujtamaca JSL u soo bandhigin khasaaraha iyo faai’dada ugu jirta qaranka heshiiskan 30 ka sandood qaadan doona.
8- Waxaa aqoonyahanka fogaan araga ahi isku wada raaceen in shirkada DPW marka ay Mulkiyada Dekeda Berbera la wareegto ay u qorshaysan tahay in ay Saami Waafiya ka iibiso Dawlada Ethiopia: Waxaana dawlada Ethipia oo dhulkeedu aanu Bad lahayn ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay mudo dheer sife kasta oo 25 keeda markab ee baddaha gacanka cadmeed gaaf wareegaaya ay ugu heli lahayd bad ay wax ku leedahay oo ay ku nastaan, una iibsato maraakiib dagaal oo kale oo quwadeeda military ubuuxiya. Waxaana arintani markhaati u noqonaysaa sidii dawlada Ethiopia ay Heshiiskan meel marintiisa uga qeyb qaadatay.